डा. केसीसंगको वार्तामा सरकारले गम्भीरता देखाएन: गगन थापा – Himalaya TV
Home » समाचार » डा. केसीसंगको वार्तामा सरकारले गम्भीरता देखाएन: गगन थापा
डा. केसीसंगको वार्तामा सरकारले गम्भीरता देखाएन: गगन थापा
२ श्रावण २०७५, बुधबार १८:१६
काठमाण्डौ, २ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले डाक्टर गोविन्द केसीसंगको वार्तामा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार र पत्रकारका परिवारका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले पछिल्लो पटक भएको वार्तामा सरकार गम्भीर नभएको र समाधान नचाहेको आरोप लगाएका हुन् ।
सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौंमा ल्याई सैनिक अस्पतालमा भर्ना गर्ने र सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने दाउमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले गोविन्द केसीको मागमा सरकारले सहमति नै नचाहेको जिकिर गरे ।
चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले व्यापारिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता थापाले शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा सरकार उदार नीतिका साथ अघि बढ्नपर्ने बताए । उनले नागरिकका लागि बराबरी अवसर नदिएसम्म मुलुकमा समावेशी विकास हुनै नसक्ने टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए । पत्रकारहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थासंगको सहकार्यमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमको आयोजना गरेको प्रेस युनियनले जनाएको छ ।